Fialan-tsasatra : Hanampy ny hafanana any Mahajanga ny « Star tour » -
AccueilVaovao SamihafaFialan-tsasatra : Hanampy ny hafanana any Mahajanga ny « Star tour »
Mafana ao anatin’ny hafanana. Taorian’ny tany Toamasina, dia hitohy ary hanampy ny hafanana any Mahajanga indray ny « Star tour ». Hetsika tafiditra ao anatin’ny fialan-tsasatra ary hotanterahina mandritra ny telo andro, ny 24 ka hatramin’ny 26 aogositra, eny amoron-dranomasina na ny « Bord » ao Mahajanga. Fiaraha-mientana amin’ny tanànan’i Mahajanga nanomboka ny taon-dasa taorian’ny disadisa narahin’ny fifampiresahana, ary nanohizana ireo hetsika ara-kolontsaina sy fialamboly izay efa natolotry ny Star efa ho 10 taona lasa.
Hampiavaka ny hetsika ny fizarana ny toerana ho telo, ka hahazoan’ny sokajin-taona rehetra ny tandrify azy avy ao anatin’ity hetsika ho an’ny mpiala sasatra sy ny mpianakavy. Ao anatin’izany ny sehatra lehibe, ny toerana ho an’ny mpianakavy ary ny toerana ho an’ny ankizy.
Isaka ny tolakandro dia misy ireo karazan-dalao samihafa ho an’ny ankizy sy ny tanora toa ny « manèges »… Ireo mpikosoka kapila, ahitana an-dry DJ Cyemci, Teejay Jerry ary Nicki Di Manu, kosa no hanomboka hanafana ny sehatra manomboka amin’ny telo, sy aorian’ny fampisehoana ataon’ireo mpanakanto maro. Hanentana hatrany ny seho kosa anefa i Honorat Fou Hehy sy Andry Barhone izay samy efa fantatra eo amin’ny fanentanana sy ny hatsikana. Hifandimby hanafana ny sehatra ny 24 aogositra i Jazz MMC sy Stéphanie. Eldiot kosa amin’ny andro faharoa ary Basta Lion sy Tence Mena no hanakatona ny « Star tour Mahajanga » amin’ity taona ity.
Isan’andro ao amin’ny toerana natokana ho an’ny mpianakavy dia hisy ny fifaninanana ho an’ireo mpampiasa ny tambazotra « Facebook ». Izany dia mifantoka amin’ny fifaninanana fakana sary miaraka amin’ireo vokatry ny Star hanentanana ny hetsika ka izay be mpankafy indrindra no hotolorana loka samihafa. « Mme Queen’s » amin’ny andro voalohany ary arahan’i « Mlle XXL » sy « Mr Amigo » amin’ireo andro roa farany.
Ny andron’ny 25 aogositra dia hisy ny hetsika filaharambe mitety ny tanàna ary mifarana eo anoloan’ny sehatra, ary hitohy amin’ny dihy mirindra ara-panatanjahantena hanasana ny rehetra na ny « Mega zumba » izany.
Nanomboka ny taon-dasa, dia maromaro ireo fepetra noraisin’ny mpikarakara mba ahatonga ity hetsika ity ho fialamboly mendrika ny mponina sy ny tanora malagasy.